Isandla sethanga,Umshini wokusetshenziswa kwethanga lamanzi osetshenziswa ngesandla
Ukusetshenziswa komshini we-peanut sheller
Kusetshenziselwa umshini wethanga le-peanut sheller . Umshini we-pearlut shaler we-Victor brand ulula, izindleko eziphansi ,ilungele ukusetshenziswa ngamakhaya nangamabhizinisi amancane.
I-peanut yisitshalo esibalulekile futhi esibalulekile esitshalwa cishe kuwo wonke umhlaba.Banikeza abalimi abancane abancane imali engaphezu kwengxenye yesine yemali yabo yonyaka yezimali zezolimo kwelinye izwe lase-Afrika. . Amantongomane kufanele aqhekeke ukuze kutholakale amantongomane, ngakho-ke ingaphinde isetshenziselwe ukukhipha uwoyela futhi isetshenziswe ezintweni zokudla.
Indlela yendabuko yokususa amantongomane kusuka ku -nutnut ukusikaza ngesandla,kodwa lapho inani elikhulu lamantongomane kufanele lisebenze ngale ndlela esebenzisa isikhathi .Ukukhoseliswa kwendlela yokukhosela enkulwaneni encane yase-Afrika kwenziwa kakhulu ngesandla. Ngenkathi ukukhishwa ngesandla kungagcina inani eliphansi lokwephuka kwe-kernel,kepha kuzothatha ukuzikhandla okukhulu kanye nokukhiqiza okuphansi.Ukuthungatha ngesandla kubeka ingcindezi enkulu kubalimi. Abadingi kuphela izinongo zamagobolondo ngaphambi kokuphela kwesikhathi sokuthengisa.,kepha futhi badinga umsebenzi emasimini abavuniwe. Kuyadingeka ukuthi basebenzise umshini wokukhipha inhlabathi ukuze ubasize ekusebenzeni kanzima.
UVictor Farm Machchan usungule umshini osebenza ngesandla wamantongomane,ezenzelwe abalimi abasezindaweni zasemakhaya nakwezimboni ezincane .this Manuel sheller luhlobo lomshini owenziwe ngomnotho futhi osezingeni eliphezulu,kungaphula kalula igobolondo le -nutnut ngaphandle kokuhlinzekwa ngogesi okudingekayo.
Isimiso esisebenzayo seManual Peanut Sheller Machine
Isendlalelo esisebenza ngesandla samantongomane sakhiwe ngohlaka olulengayo olufakwa endlini yensimbi enophansi wesikrini we-concave. Njengoba uzimele lukhahliwe, amantongomane angena esikhaleni phakathi kwe-roller nesikrini. Iyasebenza, inhlabathi ku-hopper ifakwa ekucaceni phakathi kwe-roller ne-concave ngenkathi i-roller iphenduka. Amantongomane abese akhishwa ngokuthinta isenzo phakathi kokugoqa nesikrini. Ngemuva kokuthi uklabishi ugcinwe, i-kernel negobolondo liwela esikrinini.
Amapharamitha wezobuchwepheshe womshini we-handnut sheller
Imodeli VHS-1 VHS-2
Ikhono 40~ 50kg / h 100~ 150kg / h
Amandla Imanuwali Imanuwali
Ubukhulu 68*35*115cm 85*60*130cm
Isisindo 25kgs 80kgs
ividiyo yomshini wokuthunga wethanga